किन कन्याम मात्र रोज्छन् इलाम पुग्ने पर्यटक ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पर्यटन > किन कन्याम मात्र रोज्छन् इलाम पुग्ने पर्यटक ?
इलाम । पर्यटकीय जिल्ला इलामको पर्यायकै रूपपरिचित छ जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित कन्याम । बाहिरबाट आएका धेरै पर्यटकहरू इलाम आएर पनि कन्यामबाट नै फिर्ने गरेका छन ।
मेची राजमार्गसँग जोडिएको भएर पनि कन्याम पर्यटकहरूका लागि सहज गन्तब्य हो । तराई र राजधानी लगायतबाट इलाम पस्दा सवैभन्दा पहिला कन्याम आउने भएकाले पनि धेरैलाई जिल्लाको प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्य कन्याम नै लाग्नु स्वाभाविक छ ।
चियावारीको जिल्ला इलाम, कन्याममा पनि ठुलो चियावारी । हेर्दा पनि हरियाली अनी सुन्दरताले कन्याम धेरै पर्यटकहरूको गन्तब्य बनेको छ । कन्याम इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा पर्दछ ।
तर चियावारी कन्याममा मात्र छैन इलामको । इलाम नगरपालिका अर्थात जिल्ला सदरमकाम छेउमा रहेको चिया वगान सुन्दर र अनी मनमोहक छ ।
पर्यटकको रोजाइमा कन्याम पर्नु स्वभाविक पनि छ । झापासँग नजिक रहेकाले पनि यहाँ ३५ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम छल्न पनि १९ डिग्रीतापक्रम छल्न कन्याम आउने गरेका छन् । मानिसले सहजता खोज्नु, विलासिता बस्तुमा वढि मुल्य खर्च गर्नु स्वभाविक जस्तै बनेको छ ।
त्यसैले पनि झापा, मोरङका जिल्लामा गर्मी बढ्दा इलाम आउने पर्यटकहरूको संख्या वढ्दै गएको छ । मोरङका रविन निरौला परिवार सहित केही दिन बस्ने गरि इलाम आए । छोराछोरीको छुट्टीको अवसर बनाएर इलाम आएका उनी र उनका परिवार इलाममा केही दिन वसे ।
तर उनीहरूले कन्याम र फिक्कल मात्र घुमेको वताए । इलाममा पनि चियावारी छ, इलामका अन्य स्थान पनि घुम्ने ठाउँ छन् भन्ने नै उनलाई थाहा छैन । उनले भने “इलाम भन्ने बित्तिकै कन्याम बुझिन्छ, यहाँ आउने बित्तिकै चियाबारी देख्न पाइन्छ,” इलाम भनेकै कन्याम बुझ्ने उनले इलाममा हेर्न लायकको कन्याम मात्र बुझेको वताए ।
३५ देखी ३८ डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा हुँदा दिउँसो सडकमा हिँड्न सक्ने अवस्था नहुने भएपछि उनी इलाममा चिसो खान आएका हुन् । गर्मीले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ ।
बढि गर्मी भएपछि मानिस चिसो खान भएपनि नजिकै रहेको इलाम आउने गरेका छन् । झापाका विजय राई वढि गमी भएपछि इलाम आफन्तकोमा आएर केही दिन बसे ।
उनले पनि छोराछोरी लिएर नै इलाम आएका थिए । केही दिन भएपनि शान्तगरि स्वास फेर्न पाएकोमा आफु र श्रीमती मात्र हैन छोरा छोरीलाई पनि आनन्द मिलेको उनी वताउँछन् । “केही दिन भएपनि शितल भयो झापा झरेपछि फेरी उही हुन्छ ।,” उनले भने ।
तराईमा गर्मी वढेपछि नजिकै रहेको इलामको कन्याम र फिक्कलसम्म धेरै पर्यटकहरू आउने गरेका छन् । विशेष गरेर शनिबार यहाँ वढि पर्यटक आउने गरेका छन् । छुट्टीको दिन फुर्सद निकालेर नै मानिसहरू यहाँ आउने गरेका छन ।
झापाबाट केही माथि उक्लेपछि भेटिने कन्याममा गर्मीबाट छलिन आन्तरिक पर्यटक बाक्लिन थालेका छन् । शनिबारको दिन त मेची राजमार्गमै पर्ने यस क्षेत्रमा ट्राफिक जाम नै हुन थालेको छ। बाह्रै महिना पर्यटकहरूको घुइँचो लागे पनि गर्मीको समयमा पर्यटकको संख्या अझ दोब्बर बढी हुने गरेको छ ।
बाहिरबाट आएकाहरूलले कन्यामलाई पूर्वको स्वर्गको उपमा दिने गरेका छन । दिउशो कन्याम र रात अन्तुमा बिताउने योजना बनाएर आउने पर्यटकहरूसमेत वढ्दै गएका छन । सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम–अन्तु पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाइ बन्ने गरेको छ ।
कन्याममा भर्खरै मात्र नगरपालिकाले ब्यापार गर्ने स्थानीय व्यापार व्यवसायका छाप्रा हटाएर केही ब्यवस्थित गरेर बस्न सिकाएको छ । जमिनमा टायल बिच्याएर आल्मोनियमका चक्कावाला सामान राख्ने बनाउन लगाएको छ ।
तर अझैपनि यतिले कन्याम ब्यवस्थित हुन नसकेको स्थानिय स्वयम वताउँछन् । गर्न सक्ने हो भने सामान्य क्रितिम संरचना बनाएर अझ पर्यटक तान्नमा नगरपालिका लाग्नु पर्ने बाहिरबाट आएका पर्यटकहरू पनि वताउँछन ।
कन्याम क्षेत्रमा रहेको घोडा र नेपाली मौलिक पहिरनमा रमाउने पर्यटकहरूको कमी छैनन । कन्यामको चिया बगानमा फोटो खिच्ने र घोडा चढ्ने काम पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षण हो ।
विभिन्न जातिय पहिरन लगाएर तस्विर कैद गर्ने पर्यटकहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् यहाँ । ग्रामीण परिवेशमा घोडा चढ्नु नौलो नभए पनि सहरी परिवेशका तथा बाह्य पर्यटकहरूका लागि नौलो र आकर्षक काम बनेको छ।
बाह्रै महिना पर्यटकको चाप हुने यस क्षेत्रलाई प्रदेश १ सरकारले सूर्योदय नगरपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विस्तार गर्न खोजेको छ । प्रदेश सरकारले यसलाई पर्यटकिय नगरी भनेर घोषणा समेत गरेको छ ।
तर चियावारी घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई इलामका अन्य स्थानमा समेत आउन पर्यटक प्रवर्दन समिति इलामका महासचिव देवी पौडेल आग्रह गर्छन ।
इलाम चियावारी, पानीटार चियावारी र जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका चियावारी पर्यटकहरूका लागि उत्तिकै मनमोहक लाग्ने पर्यटन ब्यवसायीहरू वताउँछन ।
इलाममा हेर्न र घुम्न लायकका अन्य वसतु, ठाउँ र स्थानहरू भैपनि कन्याम अनी चियाले मात्र चर्चा पाएको उनीहरूको भनाई छ ।
विश्व रामसार क्षेत्रमा सुचिकृत माइपोखरी, प्रदेश नम्वर एकको प्रमुख पर्यटकिय गन्तब्य मानिने सन्दकपुर र जिल्ला भित्र रहेका धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरूको समेत उत्तिकै चर्चा हुन सके अन्य स्थानमा पनि पर्यटकहरूको भिड लाग्ने सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।
जिल्लाका ग्रामिण भेगमा पुग्ने सडक हिउँदका दिनमा मात्र चल्ने भएपछि पनि अन्य स्थानमा पर्यटक कम पुग्ने गरेका छन । –टीका खतिवडा/कारोवार दैनिक
२०७६ भदौ १९ गते १४:४७ मा प्रकाशित
मार्जिन कारोबार राफसाफका लागि छुट्टै हितग्राही खाता
हाईड्रोको ६ करोड ३३ लाखको आईपिओ निष्काशनबारे जानकारी राख्नुहोस् !
सेनाको निःशुल्क बस सेवा, हेर्नुहोस् ! कुन रुटमा कतिबेला गाडी चल्छ ?
२४ अंकले सेयर बजार घट्दा के के भयो आज ?